အင်္ဂလိပ်လက်ဝှေ့သမားကို အင်္ဂလန်မှာ အသေထိုးသတ်လိုက်တဲ့ မြန်မာမောင်သောင်း – Tameelay
အင်္ဂလိပ်လက်ဝှေ့သမားကို အင်္ဂလန်မှာ အသေထိုးသတ်လိုက်တဲ့ မြန်မာမောင်သောင်း
မောင်သောင်းကို အဖဦးဖိုးခင်၊ အမိဒေါ်စိန်တို့မှ ၁၉၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ရက်၊ကြာသပတေးနေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ထဲက အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ် ၃ကြိမ်တိုက်၍ သိမ်းပိုက်သွားခြင်းကို များစွာ ခံပြင်းဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ “လက်နက်အင်အားမမျှ၍ ငါတို့လူမျိုး သူများ လက်အောက်ရောက်ရပေသည်” ဟု အမြဲအံကြိတ်၍ တောက်ခေါက်ခဲ့သည်။ အသက်၁၀နှစ်မှစ၍ လက်ဝှေ့ထိုးလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ၉တန်းနှစ်၌ မြန်မာကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို အင်္ဂလိပ် ကပြား၃ယောက်က ဝိုင်းထိုးနေသည်ကို ဝင်ရောက်ကူညီပြီး ထိုကပြား ၃ယောက်ကိုမေ့မြောပြီး သွားတွေ ကျွတ်ထွက်အောင် လက်သီးစွမ်းပြခဲ့သောကြောင့် ၉တန်းနှင့်ကျောင်းထွက်ခဲ့ရသည်။
ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုးများ စစ်မှုထမ်းခွင့်၊ လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ခွင့် မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယသို့ သွားရောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားရတော့သည်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် ၁၉၄၁ခုနှစ်တွင် SS BUIMR အမည်ရှိသင်္ဘော၌ မီးထိုးသမား ဘဝဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘေသို့ လိုက်သွားခဲ့သည်။ ဘုံဘေရှိကြေးစားလက်ဝှေ့သမားများကို အနိုင်ထိုးသတ်ခဲ့သည်။ အလဲထိုးသည်သာ များလေသည်။ သို့သော်မောင်သောင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများကို အလဲထိုးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကွက်ကောင်းကို ရှာနေခဲ့သည်။ လက်သီးပြင်းရန် သဲအိတ်များကို သဲကြီးမဲကြီး ထိုးသတ်လေ့ကျင့်သလို၊ အထိုးခံနိုင်ရန် သံတုံးများထည့်ထားသော ပုံးကို ပါးစပ်နှင့်ကိုက်မ၍ ပါးစောင်ရှိကြွက်သားများ သန်မာစေရန်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိကြေးစား အလဲထိုးချန်ပီယံ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဟယ်ရီဘလူးဖြင့် ထိုးသတ်ခွင့်ရခဲ့သည်။
၃မိနစ် ၈ချီထိုးသတ်ပွဲဖြစ်သည်။ မောင်သောင်းက ဖယ်သာဝိတ် ၁၂၆ပေါင်၊ အင်္ဂလိပ်လက်ဝှေ့သမား ဟယ်ရီဘလူးက လိုက်ဝိတ် ၁၃၂ပေါင်ရှိသည်။ ဒိုင်လူကြီး အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများက ဘက်လိုက်ခဲ့သော်လည်း ဆဌမအချီတွင်တော့ ဒိုင်ပွဲရပ်ဖြင့် မောင်သောင်း အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ဟယ်ရီဘလူးဆေးရုံ၌ ရက် ၂၀ခန့် ကုသမှုခံယူခဲ့ရသည်။ မောင်သောင်း ပထမအဆင့် အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် အင်္ဂလန်မြေ၌ အင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံကို ထိုးသတ် ရပါဦးမည်။ မောင်သောင်း အမေရိကန်၊ စကော့တလန်၊ ထိုင်း၊ ကနေဒါ၊ အင်္ဂလန်၊ စင်္ကာပူ၊ အိန္ဒိယတို့မှ ကြေးစားလက်ဝှေ့သမားများကို အနိုင်ယူခဲ့သည်။ထိုအချိန်တုန်းက အင်္ဂလန်မှာ ကမ္ဘာကျော်ကြေးစား လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦးပေါ်ထွန်းနေပါသည်။ သူ့နာမည်က ဒေါက်ဂလပ်စမင်ဖြစ်သည်။ ပွဲ ၄၀ထိုး ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိပဲ ပွဲ ၃၀ အလဲထိုးထားသူ အင်္ဂလန်ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ မှာတော့ ကမ္ဘာကျော် အင်္ဂလန်လက်ဝှေ့သမား ဒေါက်ဂလပ်စမင်ကို မောင်သောင်းက လန်ဒန်သို့ သွားရောက်စိမ်ခေါ်ခဲ့လေသည်။
အင်္ဂလန်မြေမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဒေါက်ဂလပ်စမင်သာ အသာလေးနိုင်သွားမည်ဟု ကမ္ဘာ့မီဒီယာများကရေးသားနေကြသည်။ ဧပြီလ ၁၇ရက်နေ့တွင် လက်ဝှေ့သမားနှစ်ယောက် ကိုယ်အလေးချိန်စစ်၊ ဆေးစစ် လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ပြသနာတက်ကြလေသည်။ ကိစ္စအားလုံးပြီး၍ လက်ဝှေ့သမားနှစ်ယောက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သောအခါ……ဒေါက်ဂလပ်စမင်က ကျွန်လူမျိုးမြန်မာတစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲနှုတ်မဆက်နိုင်ဘူး။ ငါက အင်္ဂလိပ်သခင်လူမျိုးဖြစ်တယ် ဆိုပြီး မောင်သောင်းလက်ကို ပုတ်ချခဲ့ပါသည်။မြန်မာမောင်သောင်းလည်း အံကိုကြိတ်ပြီး “ငါကလည်း လက်နက်မမျှလို့ စစ်ရှုံးခဲ့ရတဲ့ ငါ့လူမျိုးတွေကိုယ်စား အင်္ဂလန်မြေမှာ အင်္ဂလိပ်ချန်ပီယံကို အသေသတ်ဖို့ ငယ်ငယ်ထဲက လေ့ကျင့်ခဲ့တာပဲ။ အင်္ဂလိပ်ကောင် ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ မင်းသေပေတော့” လို့ တစ်ခွန်းချင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အရပ် ၅ပေ ၆လက်မပဲရှိတဲ့ လူပုလေးမြန်မာမောင်သောင်းက အရပ် ၆ပေရှိတဲ့ အင်္ဂလန် လိုက်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံကို အသေသတ်မယ်ဆိုတော့၁၉၄၇ ဧပြီ ၁၇ရက်နေ့မှာ လန်ဒန်မြို့ တိုရန်တိုလက်ဝှေ့ရုံကြီးလူ ၃၀၀၀၀(သုံးသောင်း)ကျော်ဖြင့် ပြည့်ညက်ပြီး လန်ဒန်မြို့သားတွေ အလုပ်တွေပစ် လက်ဝှေ့ရုံထဲ စိတ်ရောက်နေကြပါတယ်။
ကြိုးဝိုင်းဆီ ဒေါက်ကလပ်စမင် လမ်းလျှောက်ဝင်လာတာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ပရိတ်သတ် ၃၀၀၀၀ရဲ့ အားပေးသံက ကွင်းပွင့်လု မတတ်ပါ။ ဆလိုက်မီးတွေကလည်း လမ်းတလျှောက် ထိုးပေးနေပါတယ်။ မောင်းသောင်းလည်း ဝင်လာရော အားနာပါးနာ လက်ခုပ်တီးသူတောင် မရှိခဲ့ပါဘူး။ “ဒီမြန်မာကောင်ကို အသေထိုး အလောင်းကို မြန်မာပြည်ပြန်ပို့လိုက်” ဆိုတဲ့ အသံတွေ ဟိန်းနေပါတယ်။ မောင်သောင်းက ကြက်သွေးရောင် ကတ္တီပါ ဝတ်ရုံကြီးခြုံပြီး ဝင်လာပါတယ်။ ဝတ်ရုံပေါ်မှာ မြန်မာမောင်သောင်းလို့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထိုးပြီး မြန်မာ့ဒေါင်းအလံကို အစိမ်းရင့်ရောင် အဝါရောင်တို့ဖြင့် ပုံဖော်ထားပါတယ်။ဒေါက်ကလပ်စမင်က “မင်းကို ငါအသေသတ်မယ်”ဟု ပွဲမစခင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ မောင်သောင်းကတော့ အံကို ကြိတ်ထားပါတယ်။ပွဲစတာနဲ့ အရပ်ရှည်တဲ့ ဒေါက်ဂလပ်စမင် ရဲ့ ထောက်လက်သီးတွေကိုရှောင်ရင်း မောင်သောင်း အတင်းဝင်လုံး ဒေါက်ဂလပ်ရဲ့အသဲနေရာကို ဖိထိုးပါတယ်။ ဒုတိယအချီတွင် ဒေါက်ဂလပ်၏ အသဲနေရာကို ညာပင့် လက်သီးတစ်လုံး မောင်သောင်းက ထိုးလိုက်ရာ ဒေါက်ဂလပ် လဲကျသွားသည်။ အမှတ်စဉ်၈မှ ပြန်ထလာပါသည်။ ပုံမှန်ဆို ဒေါက်ကလပ် အရှုံးပေးပါပြီ။ နံရိုးတွေ ကျိုးမတတ်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် လူပုလေးကျွန်မျိုး မြန်မာမောင်သောင်းကို အင်္ဂလန်မြေ၊ ကိုယ့်လူမျိုး အင်္ဂလိပ်တွေရှေ့မှာ အရှုံးမပေးဘူးဆိုပြီး ရအောင် အားတင်း ဆက်ထိုးပါတယ်။ မောင်သောင်းလည်း ဘယ်လောက် အရှောင်ကောင်းကောင်း လူသန်ကြီးဒေါက်ကလပ်ရဲ့ ထိုးချက်တစ်ချို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိထားတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ပါ။ စတုတ္ထအချီနဲ့ ပဉ္စမအချီမှာတော့ ဒေါက်ကလပ်က နံကြားနဲ့ အသဲနေရာကို တံတောင်နဲ့ ကာထားတော့ လွတ်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ နားထင်ကို မောင်သောင်း အတင်းဝင် လုံးပြီးထိုးတာ ဒေါက်ကလပ်နားထင်ကွဲပြီး သွေးတွေယိုစီးကျလာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အင်္ဂလိပ်ဒိုင်တွေက သူတို့လူနာလို့ ၃မိနစ်မပြည့်ပဲ ၂မိနစ်နဲ့ ဆဉ္စမအချီပွဲပြီး ခေါင်းလောင်းတီးပြီး သူတို့လူဒေါက်ကလပ် မရှုံးအောင် နားရအောင် ဝိုင်းညစ်ကြပါတယ်။ မောင်သောင်းလည်း မျက်နှာတစ်ခုလုံး သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ ဖူးယောင်မူးဝေနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အားတင်းထားပါတယ်။ သူငယ်ငယ်ထဲက လက်ဝှေ့လေ့ကျင့်လာတာ အင်္ဂလိပ်တွေကို အလဲထိုးဖို့မှတ်လား။
နဝမအချီတွင်တော့ ဒေါက်ကလပ်၏ လက်သီးနှစ်ချက်ကို အနာခံ တိုးဝင်ပြီး လွတ်သွားတဲ့ ဒေါက်ကလပ်ရဲ့ နံဘေးနှစ်ဖက်ကို အားကုန်သုံး ဘယ်ညာဆင့် ထိုးလိုက်ရာ ဒေါက်ကလပ်ပြန်မထလာတော့ပါဘူး။ ပရိတ်သတ် အင်္ဂလိပ်တွေ အကုန် ဟာခနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အမှတ်စဉ် ၁၀ အထိ ဖြည်းဖြည်းချင်းရေလည်း ထမလာတော့ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ပရိတ်သတ်တွေက မောင်သောင်းကို သတ်မယ်ဆိုပြီး လက်ဝှေ့စင်ပေါ် တက်ဖို့ကြိုးစားကြလို့ ရဲတွေက လက်ချင်းချိတ် တားထားရပါတယ်။ မောင်သောင်းကတော့ အောင်နိုင်သူအပြုံးနဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေကို ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် သူရဲကောင်းကြီး မြန်မာမောင်သောင်းရှေ့ ဒူးထောက်ခဲ့ရပြီ မဟုတ်ပါလား။နောက်တစ်နေ့ လန်ဒန်မြို့ The Evening News နဲ့ Sports News သတင်းစာတွေမှာ မြန်မာလက်ဝှေ့သမား မောင်သောင်းသတ်လို့ ချန်ပီယံ ဒေါက်ဂလပ်စမင် သေတဲ့သတင်း ပါလာပါတယ်။ ဒေါက်ဂလပ်စမင်ကို လန်ဒန်ဆေးရုံက အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ကုသခဲ့သော်လည်း နံရိုးနှစ်ချောင်း ကျွံဝင်သွားပြီး အဆုတ်ကွဲသွားသဖြင့် ည ၁၀နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ဆုံးသွားကြောင်း ပါလာသဖြင့် အင်္ဂလန်တစ်နိုင်ငံလုံး ဝမ်းနည်း ပူဆွေးခဲ့ရလေသည်။ မြန်မာမောင်သောင်းကတော့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဒီလိုဖြေခဲ့ပါတယ်။
” နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကို တို့မြန်မာတွေ လက်နက်ချင်းမတူမျှလို့ စစ်ရှုံးခဲ့ရပေမယ့် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ငါ တစ်ယောက်ချင်း တူညီတဲ့ လက်အိတ်ကို စွပ်ပြီး ပေ ၂၀ ကြိုးဝိုင်းစစ်တလင်းမှာ စစ်ခင်းရာမှာတော့ အင်္ဂလိပ်တွေ ငါ့ကို ဒူးထောက်စမြဲပါ။ ငါ့ လူမျိုးနဲ့ ငါ့တိုင်းပြည်ကို ကျွန်လုပ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ တွေ့ရလေတိုင်း ငါ့အရိုးတွေ ကွဲကွဲ၊ ငါ့အသားတွေကြွေလို့ ငါအသက်ပင်သေပါစေ တစ်လက်မမှ မဆုတ်တမ်း ငါတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို သေသည်အထိငါမပြင်”
မြန်မာလက်ဝှေ့သမား မောင်သောင်းဟာ အာရှနဲ့ အနောက်တိုင်းတစ်ခွင် ပွဲပေါင်း ၂၀၀ကျော်ထိုးသတ်ခဲ့ရာဝယ် ၁၈၈ပွဲ အနိုင်ရခဲ့ပြီး အနားယူခဲ့လေသည်။(မြန်မာလက်ဝှေ့ဝါသနာရှင် မျိုးချစ်လူငယ်တို့ လူကောင်သေးလို့ အားမငယ်နဲ့ အထိုးခံနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့် လက်သီးက သံမဏိလို မာကျောပါစေ။ ခြေကိုမသုံးပဲ ကမ္ဘာကို ဝင်တိုးဖို့ လက်ချည်းသက်သက် လေ့ကျင့်ကြမယ်။ မြန်မာမောင်သောင်းတို့ အမျိုးညံ့ရိုးလား။ အသဲကောင်းလို့ ပွဲမတောင်းနဲ့ မြန်မာတဲ့ဟေ့။)
(တိမ်မြုပ်နေတဲ့ မြန်မာသူရဲကောင်းတွေကို ဖော်ထုတ်အတုယူပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ပါ)
အင်ျဂလိပျလကျဝှသေ့မားကို အင်ျဂလနျမှာ အသထေိုးသတျလိုကျတဲ့ မွနျမာမောငျသောငျး
မောငျသောငျးကို အဖဦးဖိုးခငျ၊ အမိဒျေါစိနျတို့မှ ၁၉၁၇ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၁၆ရကျ၊ကွာသပတေးနတှေ့ငျမှေးဖှားခဲ့သညျ။ ငယျစဉျထဲက အင်ျဂလိပျတှေ မွနျမာနိုငျငံကို စဈ ၃ကွိမျတိုကျ၍ သိမျးပိုကျသှားခွငျးကို မြားစှာ ခံပွငျးဒေါသထှကျခဲ့သညျ။ “လကျနကျအငျအားမမြှ၍ ငါတို့လူမြိုး သူမြား လကျအောကျရောကျရပသေညျ” ဟု အမွဲအံကွိတျ၍ တောကျခေါကျခဲ့သညျ။ အသကျ၁၀နှဈမှစ၍ လကျဝှထေို့းလကေ့ငျြ့ခဲ့သညျ။ ၉တနျးနှဈ၌ မွနျမာကြောငျးသားတဈယောကျကို အင်ျဂလိပျ ကပွား၃ယောကျက ဝိုငျးထိုးနသေညျကို ဝငျရောကျကူညီပွီး ထိုကပွား ၃ယောကျကိုမမွေ့ောပွီး သှားတှေ ကြှတျထှကျအောငျ လကျသီးစှမျးပွခဲ့သောကွောငျ့ ၉တနျးနှငျ့ကြောငျးထှကျခဲ့ရသညျ။
ထိုစဉျက မွနျမာနိုငျငံတှငျ မွနျမာလူမြိုးမြား စဈမှုထမျးခှငျ့၊ လကျဝှထေို့းသတျခှငျ့ မရှိပေ။ ထို့ကွောငျ့ အိန်ဒိယသို့ သှားရောကျနိုငျရနျ ကွိုးစားရတော့သညျ။ ငှကွေေးမတတျနိုငျသဖွငျ့ ၁၉၄၁ခုနှဈတှငျ SS BUIMR အမညျရှိသင်ျဘော၌ မီးထိုးသမား ဘဝဖွငျ့အိန်ဒိယနိုငျငံ ဘုံဘသေို့ လိုကျသှားခဲ့သညျ။ ဘုံဘရှေိကွေးစားလကျဝှသေ့မားမြားကို အနိုငျထိုးသတျခဲ့သညျ။ အလဲထိုးသညျသာ မြားလသေညျ။ သို့သျောမောငျသောငျး၏ ရညျရှယျခကျြမှာ အင်ျဂလိပျလူမြိုးမြားကို အလဲထိုးရနျဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အကှကျကောငျးကို ရှာနခေဲ့သညျ။ လကျသီးပွငျးရနျ သဲအိတျမြားကို သဲကွီးမဲကွီး ထိုးသတျလကေ့ငျြ့သလို၊ အထိုးခံနိုငျရနျ သံတုံးမြားထညျ့ထားသော ပုံးကို ပါးစပျနှငျ့ကိုကျမ၍ ပါးစောငျရှိကွှကျသားမြား သနျမာစရေနျလကေ့ငျြ့ခဲ့သညျ။ နောကျဆုံးတှငျ အိန်ဒိယနိုငျငံရှိကွေးစား အလဲထိုးခနျြပီယံ အင်ျဂလိပျလူမြိုး ဟယျရီဘလူးဖွငျ့ ထိုးသတျခှငျ့ရခဲ့သညျ။
၃မိနဈ ၈ခြီထိုးသတျပှဲဖွဈသညျ။ မောငျသောငျးက ဖယျသာဝိတျ ၁၂၆ပေါငျ၊ အင်ျဂလိပျလကျဝှသေ့မား ဟယျရီဘလူးက လိုကျဝိတျ ၁၃၂ပေါငျရှိသညျ။ ဒိုငျလူကွီး အင်ျဂလိပျလူမြိုးမြားက ဘကျလိုကျခဲ့သျောလညျး ဆဌမအခြီတှငျတော့ ဒိုငျပှဲရပျဖွငျ့ မောငျသောငျး အနိုငျရရှိခဲ့သညျ။ဟယျရီဘလူးဆေးရုံ၌ ရကျ ၂၀ခနျ့ ကုသမှုခံယူခဲ့ရသညျ။ မောငျသောငျး ပထမအဆငျ့ အောငျမွငျခဲ့ပါပွီ။ဒုတိယအဆငျ့အနဖွေငျ့ အင်ျဂလနျမွေ၌ အင်ျဂလိပျခနျြပီယံကို ထိုးသတျ ရပါဦးမညျ။ မောငျသောငျး အမရေိကနျ၊ စကော့တလနျ၊ ထိုငျး၊ ကနဒေါ၊ အင်ျဂလနျ၊ စင်ျကာပူ၊ အိန်ဒိယတို့မှ ကွေးစားလကျဝှသေ့မားမြားကို အနိုငျယူခဲ့သညျ။ထိုအခြိနျတုနျးက အင်ျဂလနျမှာ ကမ်ဘာကြျောကွေးစား လကျဝှသေ့မားတဈဦးပျေါထှနျးနပေါသညျ။ သူ့နာမညျက ဒေါကျဂလပျစမငျဖွဈသညျ။ ပှဲ ၄၀ထိုး ရှုံးပှဲလုံးဝမရှိပဲ ပှဲ ၃၀ အလဲထိုးထားသူ အင်ျဂလနျရဲ့သူရဲကောငျးဖွဈသညျ။ ၁၉၄၇ မှာတော့ ကမ်ဘာကြျော အင်ျဂလနျလကျဝှသေ့မား ဒေါကျဂလပျစမငျကို မောငျသောငျးက လနျဒနျသို့ သှားရောကျစိမျချေါခဲ့လသေညျ။
အင်ျဂလနျမွမှော အင်ျဂလိပျလူမြိုးဒေါကျဂလပျစမငျသာ အသာလေးနိုငျသှားမညျဟု ကမ်ဘာ့မီဒီယာမြားကရေးသားနကွေသညျ။ ဧပွီလ ၁၇ရကျနတှေ့ငျ လကျဝှသေ့မားနှဈယောကျ ကိုယျအလေးခြိနျစဈ၊ ဆေးစဈ လကျမှတျထိုးပွီးနောကျ ပွသနာတကျကွလသေညျ။ ကိစ်စအားလုံးပွီး၍ လကျဝှသေ့မားနှဈယောကျ လကျဆှဲနှုတျဆကျသောအခါ……ဒေါကျဂလပျစမငျက ကြှနျလူမြိုးမွနျမာတဈယောကျကို လကျဆှဲနှုတျမဆကျနိုငျဘူး။ ငါက အင်ျဂလိပျသခငျလူမြိုးဖွဈတယျ ဆိုပွီး မောငျသောငျးလကျကို ပုတျခခြဲ့ပါသညျ။မွနျမာမောငျသောငျးလညျး အံကိုကွိတျပွီး “ငါကလညျး လကျနကျမမြှလို့ စဈရှုံးခဲ့ရတဲ့ ငါ့လူမြိုးတှကေိုယျစား အင်ျဂလနျမွမှော အင်ျဂလိပျခနျြပီယံကို အသသေတျဖို့ ငယျငယျထဲက လကေ့ငျြ့ခဲ့တာပဲ။ အင်ျဂလိပျကောငျ ကွိုးဝိုငျးထဲမှာ မငျးသပေတေော့” လို့ တဈခှနျးခငျြးပွနျပွောခဲ့ပါတယျ။အရပျ ၅ပေ ၆လကျမပဲရှိတဲ့ လူပုလေးမွနျမာမောငျသောငျးက အရပျ ၆ပရှေိတဲ့ အင်ျဂလနျ လိုကျဝိတျတနျးခနျြပီယံကို အသသေတျမယျဆိုတော့၁၉၄၇ ဧပွီ ၁၇ရကျနမှေ့ာ လနျဒနျမွို့ တိုရနျတိုလကျဝှရေုံ့ကွီးလူ ၃၀၀၀၀(သုံးသောငျး)ကြျောဖွငျ့ ပွညျ့ညကျပွီး လနျဒနျမွို့သားတှေ အလုပျတှပေဈ လကျဝှရေုံ့ထဲ စိတျရောကျနကွေပါတယျ။
ကွိုးဝိုငျးဆီ ဒေါကျကလပျစမငျ လမျးလြှောကျဝငျလာတာနဲ့ အင်ျဂလိပျပရိတျသတျ ၃၀၀၀၀ရဲ့ အားပေးသံက ကှငျးပှငျ့လု မတတျပါ။ ဆလိုကျမီးတှကေလညျး လမျးတလြှောကျ ထိုးပေးနပေါတယျ။ မောငျးသောငျးလညျး ဝငျလာရော အားနာပါးနာ လကျခုပျတီးသူတောငျ မရှိခဲ့ပါဘူး။ “ဒီမွနျမာကောငျကို အသထေိုး အလောငျးကို မွနျမာပွညျပွနျပို့လိုကျ” ဆိုတဲ့ အသံတှေ ဟိနျးနပေါတယျ။ မောငျသောငျးက ကွကျသှေးရောငျ ကတ်တီပါ ဝတျရုံကွီးခွုံပွီး ဝငျလာပါတယျ။ ဝတျရုံပျေါမှာ မွနျမာမောငျသောငျးလို့ အင်ျဂလိပျလိုရေးထိုးပွီး မွနျမာ့ဒေါငျးအလံကို အစိမျးရငျ့ရောငျ အဝါရောငျတို့ဖွငျ့ ပုံဖျောထားပါတယျ။ဒေါကျကလပျစမငျက “မငျးကို ငါအသသေတျမယျ”ဟု ပှဲမစခငျပွောခဲ့ပါတယျ။ မောငျသောငျးကတော့ အံကို ကွိတျထားပါတယျ။ပှဲစတာနဲ့ အရပျရှညျတဲ့ ဒေါကျဂလပျစမငျ ရဲ့ ထောကျလကျသီးတှကေိုရှောငျရငျး မောငျသောငျး အတငျးဝငျလုံး ဒေါကျဂလပျရဲ့အသဲနရောကို ဖိထိုးပါတယျ။ ဒုတိယအခြီတှငျ ဒေါကျဂလပျ၏ အသဲနရောကို ညာပငျ့ လကျသီးတဈလုံး မောငျသောငျးက ထိုးလိုကျရာ ဒေါကျဂလပျ လဲကသြှားသညျ။ အမှတျစဉျ၈မှ ပွနျထလာပါသညျ။ ပုံမှနျဆို ဒေါကျကလပျ အရှုံးပေးပါပွီ။ နံရိုးတှေ ကြိုးမတတျဖွဈနပေါပွီ။
ဒါပမေယျ့ လူပုလေးကြှနျမြိုး မွနျမာမောငျသောငျးကို အင်ျဂလနျမွေ၊ ကိုယျ့လူမြိုး အင်ျဂလိပျတှရှေမှေ့ာ အရှုံးမပေးဘူးဆိုပွီး ရအောငျ အားတငျး ဆကျထိုးပါတယျ။ မောငျသောငျးလညျး ဘယျလောကျ အရှောငျကောငျးကောငျး လူသနျကွီးဒေါကျကလပျရဲ့ ထိုးခကျြတဈခြို့ကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ထိထားတော့ မကျြနှာတဈခုလုံး သှေးအလိမျးလိမျးနဲ့ပါ။ စတုတ်ထအခြီနဲ့ ပဉ်စမအခြီမှာတော့ ဒေါကျကလပျက နံကွားနဲ့ အသဲနရောကို တံတောငျနဲ့ ကာထားတော့ လှတျနတေဲ့ မကျြနှာနဲ့ နားထငျကို မောငျသောငျး အတငျးဝငျ လုံးပွီးထိုးတာ ဒေါကျကလပျနားထငျကှဲပွီး သှေးတှယေိုစီးကလြာပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ အင်ျဂလိပျဒိုငျတှကေ သူတို့လူနာလို့ ၃မိနဈမပွညျ့ပဲ ၂မိနဈနဲ့ ဆဉ်စမအခြီပှဲပွီး ခေါငျးလောငျးတီးပွီး သူတို့လူဒေါကျကလပျ မရှုံးအောငျ နားရအောငျ ဝိုငျးညဈကွပါတယျ။ မောငျသောငျးလညျး မကျြနှာတဈခုလုံး သှေးအလိမျးလိမျးနဲ့ ဖူးယောငျမူးဝနေပေါပွီ။ ဒါပမေယျ့ အားတငျးထားပါတယျ။ သူငယျငယျထဲက လကျဝှလေ့ကေ့ငျြ့လာတာ အင်ျဂလိပျတှကေို အလဲထိုးဖို့မှတျလား။
နဝမအခြီတှငျတော့ ဒေါကျကလပျ၏ လကျသီးနှဈခကျြကို အနာခံ တိုးဝငျပွီး လှတျသှားတဲ့ ဒေါကျကလပျရဲ့ နံဘေးနှဈဖကျကို အားကုနျသုံး ဘယျညာဆငျ့ ထိုးလိုကျရာ ဒေါကျကလပျပွနျမထလာတော့ပါဘူး။ ပရိတျသတျ အင်ျဂလိပျတှေ အကုနျ ဟာခနဲ ဖွဈသှားပါတယျ။ အမှတျစဉျ ၁၀ အထိ ဖွညျးဖွညျးခငျြးရလေညျး ထမလာတော့ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ပရိတျသတျတှကေ မောငျသောငျးကို သတျမယျဆိုပွီး လကျဝှစေ့ငျပျေါ တကျဖို့ကွိုးစားကွလို့ ရဲတှကေ လကျခငျြးခြိတျ တားထားရပါတယျ။ မောငျသောငျးကတော့ အောငျနိုငျသူအပွုံးနဲ့ အင်ျဂလိပျတှကေို ကွညျ့နလေိုကျပါတယျ။ အင်ျဂလိပျ သူရဲကောငျးကွီး မွနျမာမောငျသောငျးရှေ့ ဒူးထောကျခဲ့ရပွီ မဟုတျပါလား။နောကျတဈနေ့ လနျဒနျမွို့ The Evening News နဲ့ Sports News သတငျးစာတှမှော မွနျမာလကျဝှသေ့မား မောငျသောငျးသတျလို့ ခနျြပီယံ ဒေါကျဂလပျစမငျ သတေဲ့သတငျး ပါလာပါတယျ။ ဒေါကျဂလပျစမငျကို လနျဒနျဆေးရုံက အရေးပျေါ ခှဲစိတျကုသခဲ့သျောလညျး နံရိုးနှဈခြောငျး ကြှံဝငျသှားပွီး အဆုတျကှဲသှားသဖွငျ့ ည ၁၀နာရီ ၄၅ မိနဈမှာ ဆုံးသှားကွောငျး ပါလာသဖွငျ့ အင်ျဂလနျတဈနိုငျငံလုံး ဝမျးနညျး ပူဆှေးခဲ့ရလသေညျ။ မွနျမာမောငျသောငျးကတော့ သတငျးထောကျတှရေဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ဒီလိုဖွခေဲ့ပါတယျ။
” နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျကို တို့မွနျမာတှေ လကျနကျခငျြးမတူမြှလို့ စဈရှုံးခဲ့ရပမေယျ့ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျနဲ့ငါ တဈယောကျခငျြး တူညီတဲ့ လကျအိတျကို စှပျပွီး ပေ ၂၀ ကွိုးဝိုငျးစဈတလငျးမှာ စဈခငျးရာမှာတော့ အင်ျဂလိပျတှေ ငါ့ကို ဒူးထောကျစမွဲပါ။ ငါ့ လူမြိုးနဲ့ ငါ့တိုငျးပွညျကို ကြှနျလုပျထားတဲ့ အင်ျဂလိပျတှနေဲ့ ကွိုးဝိုငျးထဲမှာ တှရေ့လတေိုငျး ငါ့အရိုးတှေ ကှဲကှဲ၊ ငါ့အသားတှကွှေလေို့ ငါအသကျပငျသပေါစေ တဈလကျမမှ မဆုတျတမျး ငါတိုကျပှဲဝငျမယျလို့ ဆုံးဖွတျထားတယျ။ အဲဒီဆုံးဖွတျခကျြကို သသေညျအထိငါမပွငျ”
မွနျမာလကျဝှသေ့မား မောငျသောငျးဟာ အာရှနဲ့ အနောကျတိုငျးတဈခှငျ ပှဲပေါငျး ၂၀၀ကြျောထိုးသတျခဲ့ရာဝယျ ၁၈၈ပှဲ အနိုငျရခဲ့ပွီး အနားယူခဲ့လသေညျ။(မွနျမာလကျဝှဝေ့ါသနာရှငျ မြိုးခဈြလူငယျတို့ လူကောငျသေးလို့ အားမငယျနဲ့ အထိုးခံနိုငျဖို့ လကေ့ငျြ့ လကျသီးက သံမဏိလို မာကြောပါစေ။ ခွကေိုမသုံးပဲ ကမ်ဘာကို ဝငျတိုးဖို့ လကျခညျြးသကျသကျ လကေ့ငျြ့ကွမယျ။ မွနျမာမောငျသောငျးတို့ အမြိုးညံ့ရိုးလား။ အသဲကောငျးလို့ ပှဲမတောငျးနဲ့ မွနျမာတဲ့ဟေ့။)
(တိမျမွုပျနတေဲ့ မွနျမာသူရဲကောငျးတှကေို ဖျောထုတျအတုယူပွီး နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျပါ)
ချစ်သူအပေါ် သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ချစ်သွားပေးမယ့် ကောင်လေးဆိုတာ ဒီလိုပါ
ချစ်သူကောင်လေးက ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင် ပျိုမေတို့ကို စွဲစွဲမြဲမြဲချစ်သွားမယ့်သူလို့ ယေဘုယျသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ၁။ အမှားလုပ်မိတာတွေကို မှတ်မထားတဲ့သူ ။ သူတို့က ပျိုမေတို့ အမှားလုပ်မိတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှတ်ထားလေ့မရှိပါဘူး။ လွယ်လွယ်ပဲ ခွင့်လွှတ်လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက သူတို့ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားလို့မဟုတ်ပေမယ့် ပျိုမေတို့စိတ်ဆင်းရဲမှာကို မလိုလားဘဲ ပြဿနာကို ရှည်ကြာမနေစေချင်သူမို့လို့ပါ။ သူတို့အနေနဲ့ စိတ်ဆိုး စိတ်တိုရင်တောင် …
ကြက်သွန်ဖြူကို မီးကင် (သို့မဟုတ်) မီးဖုတ်ပြီး စားလိုက်သောအခါ
ကြက်သွန်ဖြူ မီးဖုတ် (သို့) မီးကင်ပြီးစားသုံးပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုပါ။ ကြက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့ သဘာဝ ဂုဏ်သတ္တိတွေဟာ ရောဂါများစွာကို ကုသပေးနိုင်ပြီး ဆေးဝါးအဖြစ်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျယ်ကျယပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ကိုလက်စထရောပမာဧကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ မီးဖုတ်ထားတဲ့ (သို့) မီးကင်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၆ မွှာကို နေ့စဉ်စားသုံးပေးတာဟာ ကျန်းမာရေးကို …
စစ်​ထွက်​ သူ​တောင်းစား ဖခင်​ကြီးကို ပစ်​ထားပီး…​သေမှ ပင်​စင်​ထုတ်​ချင်​လို့ ​သေစာရင်းလာ​တောင်း သတဲ့​လေ…
စစ်​ထွက်​ သူ​တောင်းစား ဖခင်​ကြီးကို ပစ်​ထားပီး…​သေမှ ပင်​စင်​ထုတ်​ချင်​လို့ ​သေစာရင်းလာ​တောင်း သတဲ့​လေ…. အဘ​ရေ…အ​ဘ…​သေရွာက​နေ ထကြည့်​ပါအုံး အဘ​ရေ…အဘ ​သေသွားတာ တနှစ်​​ကျော်​မှ အဘ သမီး ရိပ်​သာကို ​ရောက်​လာကြတယ်​ အဘ​ရေ…ရိပ်​သာ​ဟောင်းမှာ ​သေသွားတဲ့ အဘဦးလှ​ရွှေသမီးပါတဲ့..အဘ​သေဆုံး​ကြောင်း​ ​ထောက်​ခံစာ​လေး လိုချင်​လို့ပါတဲ့…ဘာအတွက်​လဲဆို​တော့ ပင်​စင်​​လေး ထုတ်​ယူချင်​လို့ပါတယ်​​လေ…. အဘရှိ​နေရင်​ ဘယ်​လိုခံစားရမယ်​မှန်းမသိ​ပေမဲ့…သမီး​တော့ …